AulaGEO, ihe kacha mma enyere maka ndị ọkaiwu Geo-engineering - Geofumadas
Nọvemba, 2019 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, cadastre, AulaGEO, Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, Engineering, Microstation-Bentley, qgis
AulaGEO bụ atụmatụ ọzụzụ, dabere na ụdị mmụta dị iche iche nke Geo-engineering, yana ngọngọ ụdịrị na usoro Geospatial, Engineering and Operations. Usoro nhazi sitere na "Ọkachamara Ọzụzụ", lekwasịrị anya na ikike; ọ pụtara na ha na-elekwasị anya na omume, na-eme ihe aga-eme na ihe omume, ọkacha mma otu oru ngo na nkwado usoro iwu nke na-ewusi ihe a na-eme ike.
Ihe omume nke usoro usoro AulaGEO gunyere:
Ndụ iji nweta ọdịnaya. Ọ pụtara na enwere ike iwere ha n ’ije akwụkwọ nke onye mmụta, ma nweta ya ọtụtụ oge ka achọrọ ruo mgbe ebighi ebi.
Enwee ike inweta na ngwaọrụ mkpanaaka.
Audio kọwara nkọwa site na nzọụkwụ, dị ka klas omenala.
Ihe maka nbudata, iji mejuputa akwukwo.
Nke ndi okacha amara putara n’otutu ha di.
30 na-ekwe nkwa ma ọ bụrụ na ejighi afọ ojuju n'ihe ịzụtara gị.
Kpamkpam inweta ọnụahịa.
E nwere ya n'asụsụ Bekee, ụfọdụ n'ime ha nwere ndepụta okwu n'asụsụ karịa 15.
Ọ dịkwa n'asụsụ Spanish.
Mmepụta echiche nke AulaGEO nke na-akọwa ụzọ kacha mma enwere ike ihu anya ya na eserese, nke emepụtara na nchịkọta dị ka ndị a:
Ọkachamara na Geospatial Modeling.
Nke a gụnyere ọzụzụ na Geographic Information Systems, na-eji ma akụrụngwa pụrụ iche (ArcGIS) yana ngwanrọ QGIS na-akwụghị ụgwọ; n'ọkwa dị elu ọ gụnyere mmepe ngwa ntanetị na ekwentị site na iji html5 na Google Maps API.
Sistemụ Ihe Ozi Geographic na ArcGIS 10
Mụta ArcGIS Pro Mfe
Mụọ ArcGIS Pro dị elu
QGIS dị mfe
QGIS + ArcGIS Pro usoro myiri n’otu ụzọ ahụ
Geolocation jiri HML5 na Google Maps
Weebụ GIS na ArcPy
Enwere ike iwere nkuzi ahụ n'otu n'otu, dabere na mkpa na ahụmịhe nke ị nwegoro, ma ọ bụ dịka nkwanye ike na ihe ọmụma mbụ.
Ọkachamara Sistemụ Siri Nnọọ
Okwu Mmalite nke Ndi Nnyocha
Omuma mmiri ide mmiri na HecRAS site na nko
Nyocha na usoro ide mmiri na ArcGIS HecRAS na GeoRAS
Ọmụmụ Google Earth
Usoro ọmụmụ na modulu a bụ ọkwa dị elu nke ndị ọrụ nwere ahụmịhe na ngwa GIS nwere ike ịnwe, mana ha bụkwa mgbanwe na-atọ ụtọ n'etiti nhazi ọrụ na ọrụ obodo. Ọ bụ ya mere Remote Sensing na Hec-RAS ọmụmụ gụnyere nyocha iji ArcGIS na QGIS, yana agụnyere Google Earth dị ka ọkwa n'ozuzu.
Ọkachamara Ndị Ọrụ Omenala
Dijitalụ ala ụdị. Usoro a gụnyere nkọwa nke ụzọ fotommetric maka iji ụdị dijitalụ na-arụ ọrụ ma na-ekwu igwe ojii site na iji onyogho, dị ka nke ikuku nke ụgbọ elu ma ọ bụ drones. N'ime usoro a, ejiri AutoDesk Recap, About3D, MeshLab, SketchFab na Bentley ContextCapture were rụọ ọrụ ndị yiri ya ma ọ bụ na-arụkọ ọrụ. Gụnyere na-emepụta ebe iji igwe ojii na-arụ ọrụ na Civil3D.
Civil 3D Level 1. Uzo mbu a gunyere njikwa nke isi ihe, ihe okike na ntinye.
Civil 3D Level 2. Nke a na-arụ ọrụ mgbakọ dị iche iche, mbara ala, akụkụ akụkụ na nha olu.
Civil 3D Level 3. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ nhazi ọkwa na ọkwa dị elu yana yana akwa na akụkụ obe.
Civil 3D Level 4. M na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri, nsị mmiri, ebe a na-agba mmiri na ụzọ ga-aga na-arụ ọrụ dị iche iche.
Usoro CAD - GIS na Excel di elu na macros.
BIM ọkachamara na Electromechanical Engineering
Revit MEP. N'ebe a, anyị kọwara nrụnye nke ihe dị iche iche nke akụrụngwa, nke metụtara usoro eletriki, sistem na sistem.
Sistemụ Eletriki. Usoro mmụta a bụ nkọwa dị nkwụmọtọ site na nzọụkwụ na-ewu ihe owuwu ụzọ atọ nke ihe niile dị na gburugburu ebe obibi nke mmiri, njikọ ya yana ọgbọ nke atụmatụ ikpeazụ.
Revit MEP maka sistemu eletriki.
Revit MEP maka sistemụ electromechanical. Na-abịa oge adịghị anya.
Revit MEP maka pipụ sistemụ. Na-abịa oge adịghị anya.
BIM ọkachamara na injin Structural
Igwe a bu ihe owuwu site na iji udiri abuo: AutoDesk Revit na CSI ETABS.
Ejiri usoro eji Revit Structure
Ọkpụkpụ nchara, jiri Advanced Steel
Nnyocha dị elu na Robot Structural
AutoDesk na-arụ ọrụ iwu ụlọ.
N'ihe banyere ETABS, onyinye a bu:
Nhazi nke ụlọ na-eguzogide ala ọma jijiji na ETABS, ọkwa 1.
Nhazi nke ụlọ na-eguzogide ala ọma jijiji na ETABS, ọkwa 2.
CSI na ETABS na-ahụ ụzọ dị iche iche.
Ihe owuwu ụlọ na ETABS. Na-abịa oge adịghị anya.
Mụta Revit Easy
BIM Fundamentals na Architectural Design na Revit
Ọkachamara nke BIM
Usoro zuru oke nke usoro BIM. Nke a bụ ihe nkuzi na-ekpuchi echiche na ọrụ bara uru maka ijikwa usoro BIM, gụnyere akụkụ 4D na 5D etinyere na mmefu ego na simulations nke usoro iwu ihe owuwu ahụ.
BIM 4D iji Navisworks. N'oge na-adịghị anya.
Ọkachamara Ahụike Ọrụ
A na-eji usoro ndị a eme ihe maka ndị na-akwadebe maka ọkwa dị elu karịa, n'ihi enweghị ike ịmara ụfọdụ koodu iji mepụta ETLS na njikwa injinịa na-agagharị. N'ihi ya, nhọrọ nke usoro nhazi usoro na mgbagha mmemme na pseudocodes, Ansys nke bụ mmekọrịta nke ihe nwere oke njedebe yana njiri geometric yana Dynamo metụtara ọrụ BIM.
Okwu Mmalite nke Mmemme
Chepụtara ya na Ansys Workbench
Nhazi na imepụta ihe eji eme ihe site na iji Nastran. Na-abịa oge adịghị anya.
Nhazi usoro na CREO. Na-abịa oge adịghị anya.
Nzube na nkwekorita site na iji MatLab. Na-abịa oge adịghị anya.
Na nkenke, AulaGEO bụ usoro ọzụzụ ọhụụ ọhụrụ na nke ọhụụ, nkuzi pụrụ iche gbadoro ụkwụ na ngalaba nke Geo-Engineering. Ọ na-agụnye ọmụmụ abụọ maka Ọdịdị, Ọrụ Obodo, Nhazi Structural, BIM na Projects Geospatial.
N'ime Pọtụfoliyo na-eso nke a ị nwere ike nyochaa isiokwu ahụ site na isiokwu niile.
Ihe ọmụmụ niileIhe omumu - 3D ModelUsoro - BIM MEPUsoro - BIM ỌrụUsoro - BIM StructureUsoro - CivilWorksUsoro - GeospatialUsoro - LandWorksUsoro - Ndụ Ndụ
N'ime Pọtụfoliyo na-eso nke a, ị pụrụ ịhụ ihe a na-enye maka ngwanro na ọzụzụ:
Ihe ọmụmụ niileUsoro nkuzi3Ds Max ọmụmụAnsys ọmụmụUsoro ArcGISUsoro AutoCADUsoro AutoDesk RecapUsoro BlenderIhe nkuzi nke obodo 3DUsoro CREO ParametricETABS ọmụmụUsoro Google EarthUsoro HEC-RASUsoro microstationUsoro mmemmeUsoro QGISUsoro nkuziUsoro ọmụmụ
Usoro Masonry Structural na ETABS - Module 2
AulaGEO gosipụtara usoro a iji kọwaa ezigbo ụlọ ọrụ na Structural Masonry Walls, na-eji ọtụtụ ...
Usoro Masonry Structural na ETABS - Module 3
Site na usoro a, ị ga-enwe ike ịkọwapụta ezigbo ụlọ maka Structural Masonry Walls, jiri ngwa ọrụ kachasị ike ...
Site na usoro a, ị ga-enwe ike ịzụlite ezigbo ụlọ na Structural Masonry Walls, na-eji ngwa ọrụ kachasị ike ...
Wantchọrọ ịmụta otu esi eji ngwaọrụ ndị ArcGIS Pro nyere, malite na ncha? Usoro a gụnyere ihe ndị bụ isi nke ...
Ebumnuche BIM a mụrụ dị ka usoro maka ịhazi data na arụmọrụ nke usoro nke ...
Nke a bụ usoro mejupụtara usoro mmụta dị elu na nke bara uru nke Structural Masonry Walls. A ga-akọwa ya na ...
Usoro Masonry Structural na ETABS - Mọdụl 1
Usoro a nwere usoro mmụta dị omimi na nke bara uru nke Structural Masonry Walls. Ihe niile metụtara ...
Usoro Masonry Structural na ETABS - Mọdụl 4
N'ime usoro a, ị ga-enwe ike ịzụlite ezigbo ụlọ maka Structural Masonry Walls, na-eji ngwa ọrụ kachasị ike ...
N'ime usoro a, ị ga-enwe ike ịkwadebe ezigbo ọrụ ụlọ nke nwere mgbidi mgbidi, na-eji ngwa ọrụ kachasị ike ...
N'ime usoro AulaGEO a, gosipụtara etu esi akwadebe ezigbo ụlọ obibi nke nwere mgbidi masonị, site na iji ...
Mụta GIS site na iji mmemme abụọ ahụ, yana otu ụdị data ịdọ aka ná ntị ingdọ aka na ntị The QGIS course in Spanish,
AulaGEO nyere usoro ihe ọmụmụ anọ a kpọrọ "Autocad Civil4D maka Topography na Ọrụ Obodo" nke ga - enyere gị aka ịmụ ...
Echiche nkiti nke ulo ulo, iji ETABS Ebumnuche nke nkuzi a bu inye ndi sonyere ihe ndi ozo ...
Nyocha na nhazi nke ụlọ - ọkwa Zero na ọkwa dị elu. Ebum n’uche nkuzi a bụ inye ndị na - eme ihe ...
Nyocha na nhazi nke ụlọ na-eguzogide ala ọma jijiji: ya na sọftụwia CSI ETABS Ebumnuche nke usoro a bụ ịnye ...
Usoro Geolocation maka gam akporo - iji html5 na Google Maps
AulaGEO bu atumatu nke ewuru kemgbe otutu oge, n’enye otutu ihe omuma ...
Usoro Google Earth - site na ncha
Bụrụ onye ọkachamara Google Earth Pro n'ezie ma jiri eziokwu ahụ bụ na enwere mmemme a n'efu. Maka ndị mmadụ, ndị ọkachamara, ndị nkuzi, ...
Mụta iji mmemme, usoro mmalite nke mmemme, flowcharts na pseudocodes, mmemme site na ọkọlọtọ chọrọ: Ọ chọrọ ka mụta ịma…
Ndụmọdụ bụ isi iji mepụta usoro ihe eji arụ ọrụ n'ime usoro nyocha ihe omimi a. More na ndị ọzọ injinia ...
Microstation - Mụta CAD Design Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta otu esi eji Microstation maka njikwa data CAD usoro a bụ ...
AulaGEO, na-ewetara gị usoro ọhụụ a lekwasịrị anya na nhazi nke ihe eji arụ ọrụ, na-eji Bentley's Microstran software ...
Mụta iji Revit, Robot Stalural Analysis na Ọganihu Ọzụzụ maka nhazi nke ụlọ. Bugo, chepụta na dọkụmentị ...
Agụmakwụkwọ Python - Mụta mmemme
AulaGEO na-ewetara onye obula bu ihe nkuzi nke Python nke gha enyere umu akwukwo aka ichota ihe na uzo ...
Ọzọkwa, onyinye ahụ na-ekpuchikwa ọmụmụ ihe na ngalaba eserese eserese na ọfịs.
Ihe ọmụmụ niileUsoro AdobeUsoro ihe osiseỌmụmụ FotoUsoro ọmụmụ
AulaGEO na-enye Adobe a nkuzi Mmetụta a, nke bụ mmemme dị egwu nke bụ akụkụ nke Adobe Creative Cloud ...
Agụmakwụkwọ Adobe Illustrator - Mụta Mfe!
Nke a bụ ihe ngosi pụrụ iche eserese eserese nke na-eji Adobe Illustrator. Ọ dị mma maka ndị chọrọ ịmụta iji ...
Zuru ezu Adobe Adobe Photoshop Adobe Photoshop bụ nchịkọta akụkọ foto nke Adobe Systems Incorporated mepụtara. Emepụtara Photoshop na ...
Usoro Microsoft PowerPoint zuru ezu
PowerPoint bụ mmemme Microsoft, ewepụtara ya maka Windows na Mac OS. Mkpa maka ...
Agụmakwụkwọ Indesign Adobe
InDesign bụ sọftụwia imepụta nke na-enye gị ohere ịme ụdị ọrụ nchịkọta akụkọ niile dịka akwụkwọ ọgụgụ, akwụkwọ elektrọnik, ...
Agụmakwụkwọ Edegharị vidiyo na Adobe Premier
AulaGEO, na - enye nkuzi a site na Adobe Suite, Premiere bụ sọftụwia eji ọtụtụ n’ime ụwa maka imepụta ...
N'ezie foto na ọkachamara igwefoto
AulaGEO na - enye ndi nile choro imuta isi okwu nke foto a, ya na ngwa ...
AulaGEO na-eweta usoro ohuru a ebe ị ga-amụta iji nweta Excel, tinye na aghụghọ na AutoCAD, Google Earth ...
Usoro Microsoft Excel - Ngozi etiti (2/2)
Oge nke a anyị na-ewetara usoro ọkwa nke etiti a, karịchaa anyị na-atụle ya dị ka ịga n'ihu nke ọkwa dị elu. Na nke a ...
Nke a bụ usoro bara uru, dịka ịnọdụ ala gị na enyi gị wee gwa gị otu esi eji Filmora. Onye nkuzi ...
Microsoft Excel - Usoro ọkwa dị larịị
Mụta Microsoft Excel - Ntọala ọkwa dị elu - bụ usoro emere maka ndị niile chọrọ ịmalite na nke a ...
Previous Post«Previous Plex.Earth Oge nyocha na-enye ndị ọkachamara AEC ihe ngosi satịlaịtị kachasị ọhụrụ n'ime AutoCAD
Next Post FES weputara India Observatory na GeoSmart IndiaNext »
3 Na-aza "AulaGEO, ihe kachasị mma maka ndị ọkachamara maka Geo-engineering"
Fernando Guasco Devereux kwuru, sị:
February, 2017 na
Nke a ga-abụ otú ụdị dị ka ịgwa m ma ọ bụrụ na ha na ndokwa ọmụmụ maka Cadastre maka 2017 na-esonụ isiokwu, isi ma digital ọdịdị ala, GIS na ekwu ọnụ ahịa Cadastral, isi nkewa, isi GIS, GIS gbasara ohere dabeere na ohere dabeere web, Usoro mmepe, nyocha nke mpaghara, atụmatụ mmepe OT.
E bipụtabeghị ahịa ahịa. Anyị na-atụ anya na-ebipụta ha n'etiti August.
Ụdị ịkwụ ụgwọ nwere ike ịbụ na nkwụnye ego, Paypal ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ.
Jose Heriberto Monroy Aguilar kwuru, sị:
Ezi ụtụtụ, Ekele, nyocha banyere ọnụahịa na ụdị ịkwụ ụgwọ mgbe mbụ modul. Ana m ekele gị nke ukwuu.